Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Olona 17 naratra vokatry ny fipoahan'ny kamio baomba tany Los Angeles
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Crime • Vaovaom-panjakana • Vaovao • Safety • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Nampihorohoro ny manodidina ilay fipoahana, nivadika fiara akaiky teo, vaky fitaratra ary trano manimba satria nandefa setroka setroka be teny amin'ny rivotra.
Ny polisy tao Los Angeles dia nandany ny tontolo andro nisamborana afomanga lehibe tao amin'ny trano iray.
16 avy amin'ny f olona 17 naratra no nentina tany amin'ny hopitaly.
Nisy ny "tsy fahombiazan'ny lozam-pifamoivoizana an'io fiara fitehirizana io", hoy ny LAPD.
Ny ezaky ny ekipan'ny baomba LAPD hamotika tahiry afomanga tsy ara-dalàna dia niafara tamin'ny fipoahana lehibe nandrava ilay Sampan-draharahan'ny polisy any Los Angeleskamio mifono vy, naratra olona 17, isan'izany ny polisy 10, ary nitaky ny famoahana trano teo akaiky teo.
Amin'ireo olona 17 naratra dia 16 no nentina tany amin'ny hopitaly ary ny iray nanilika ny safidy hitondrana azy.
Ny fipoahana dia tokony ho tamin'ny 7 ora sy sasany hariva tamin'ny alarobia alina tao amin'ny sakana 30 amin'ny East 700th Street, izay nandanian'ny polisy ny iray andro tamin'ny fisamborana afomanga lehibe tao amin'ny trano iray. Nahita fitaovana "coke can-size" 27 vita an-trano izy ireo niaraka tamin'ny vovoka sy fuse tamin'izy ireo, ary fitaovana 40 kely kokoa mitovy aminy. Ny ekipan'ny baomba dia nanapa-kevitra azy ireo ho "mora miovaova".
Ireo fitaovana ireo dia nafindra tao amin'ny "fiara fitehirizana tanteraka" misy efi-trano vy, izay natao hitehirizana fitaovam-pipoahana azo vonoina soa aman-tsara.
Rehefa nipoaka ny entana fotoana fohy taorian'ny 7 ora sy sasany alina Alarobia dia nisy ny "tsy fahombiazan'ny lozam-pifamoivoizana an'io fiara fitaterana io", hoy ny LAPD.
Fianakaviana sivy ao amin'ny manodidina no nafindra toerana hiala ny tranony taorian'ny fipoahana.
Nilaza ny Sampan-draharahan'ny polisy any Los Angeles fa hatao famotorana mandritra ny andro ho avy io fipoahana io. Ny alakamisy izao dia tokony ho tonga eny an-toerana ny mpanadihady federaly.